Dowladda Soomaaliya oo lacag dul dhigtay horjoogaha cusub ee Al-Shabaab |
Dowladda Soomaaliya oo lacag dul dhigtay horjoogaha cusub ee Al-Shabaab
Published on September 27, 2014 by Admin · No Comments · 583 views
Taliska ciidanka Nabad-sugidda Soomaaliyeed ayaa horjoogaha cusub ee Al-Shabaab Axmed Cumar Abuu Cubaydah madaxiisa dul dhigay lacag la siin doono ciddii keenta macluumaad fududeeya in nolosha lagu qabto ama la dilo.
Taliyaha ciidanka Nabad-Sugidda iyo Sirdoonka Soomaaliya Generaal Cabdiraxmaan Maxamed Tuuryare oo ka hadlay munaasabad ka dhacay xalay Muqdisho ayaa ku dhawaaqay in hay’addu ay qof kasta oo gacan ka geysata in nolosha lagu qabto horjoogaha Al-Shabaab siin doono laba milyan oo Dollar ($2m) halka qofkii bixiya macluumaad sahla in la dilo uu heli doono hal milyan oo Doolar ($1m).
Maleeshiyada Al-Shabaab oo xiriir la leh Al-Qaacidda ayaa dagaal muddo dheer ka wadda waddanka, ayadoo dagaalyahanno shisheeye keentay waddanka si ay uga qeyb qaataan dhibaatada ay kooxdu ku heyso dadka Soomaaliyeed, ayagoo qaraxyo iyo dilal joogto ah ku haya bulshada.
Generaal Tuuryare ayaa ballan qaaday in la qarin doono qofka keena macluumaadkaas si ammaankiisa loo ilaaliyo.
Maleeshiyaadka Al-Shabaab ayaa horjooge u magacowday Axmed Cumar oo loo yaqaano Abuu Cubeyda, Axmed Diriye, Axmed Dheere, Axmed Cumar kaddib markii la dilay horjoogihii hore ee kooxdaas Axmed Cabdi Godane oo kooxda maamulayay tan iyo 2008dii.
Dowladda Mareykanka ayaa horay u bixisay yahooh lacageed oo la siinayo qofkii soo sheega warbixin suurta galiso in la dilo ama la qabto horjoogeyaasha kooxda argagixisada ah ee Al-Shabaab ee dagaallada ka wadda dalkeena.